Andohan’Ilakaka… Toamasina: hosazina ireo miaramila nihoa- pefy nandratra sy nitifitra olona | NewsMada
Andohan’Ilakaka… Toamasina: hosazina ireo miaramila nihoa- pefy nandratra sy nitifitra olona
Par Taratra sur 21/07/2020
Tany Toamasina, miaramila iray nidaroka sy nandratra lahiantitra iray. Omaly indray, niafara tamin’ny fidinana an-dalambe ny fihoaram-pefy nataon’ny miaramila iray, nitifitra ka nandratra tovolahy iray, tany Andohan’Ilakaka. Nandray fepetra hanasazy azy ireo ny eo anivon’ny Tafika.
Manoloana ny fihoaram-pefy nataon’ireo miaramila tany Ilakaka sy tany Toamasina, naka ny andraikiny ny eo anivon’ny Tafika ka nandray an-tanana ny fitsaboana ilay olona naratra. Efa mandeha ny fifampiresahan’ny tompon’andraikitry ny Tafika any an-toerana sy ireo vahoaka izay nitokona noho ity tranga ity amin’izao fotoana izao. “Noraisina avy hatrany ny fepetra famaizana ho an’ireto miaramila tsy nahafehy tena ireto. Ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena dia mankasitraka ireo nanao tatitra mikasika ireo fihoaram-pefy sy fihetsika tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy ataon’ny miaramila sasantsasany eny anivon’ny fiarahamonina, manantitra ny fialan-tsiny amin’ireo voakasik’izany ary mangataka hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny vaho­aka hisian’ny filaminana, indrindra amin’izao ady amin’ ny Covid-19 izao”, hoy ny avy amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena.
Notifirina fa tsy nanao arotava
Raha ny tranga niseho, miaramila iray avy ao amin’ny vondrona iraisam-piadiana voalohany na ny 1er BIA Ihosy namita iraka nanentana ny fampiharana ny fepetra ara-pahasalamana momba ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus tao Andohan’Ilakaka ity nitifitra olona ity. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary any an-toerana, nisy fifamaliana teo amin’ilay lehilahy sy ilay miaramila momba ny tsy fanaovana arovava ka nahatonga ilay miaramila na­hatifitra ilay niharam-boina. Nentina tao amin’ny ho­pi­ta­lin’Andohan’Ilakaka ilay niharam-boina mialoha ny nitondrana azy niakatra tao amin’ny hopitaliben’ Ihosy. Niteraka hatezerana teo amin’ny mponina ao an-toerana ny fihetsik’ity miaramila tsy nahafehy ny fitaovam-piadiana teny am-pelatanany ity ka nirohotra nihorakoraka sady nanala arovava nanerana ny tanàna ho firaisankina manoloana izao herisetra izao. Nisy ny fivoriana maika niarahan’ny OMC Ihosy handaminana ity raharaha ao Ilakaka ity ary niditra an-tsehatra nanao ny fandaminana ny mpitandro filaminana.
Lahiantitra iray koa nodarohin’ny miaramila tao Toamasina
Lahiantitra iray 62 taona koa nodarohin’ny miaramilan’ny Jenia Barikadimy Toa­ma­sina tao amin’ny fokontany Mangarivotra Avaratra, parisela 11/12, ny zoma lasa teo. Voalazan’ny fampitam-baovao avy any Toamasina fa avy nividy fritin’akondro ary nitondra izany ho an’ny zafikeliny izy sady nihinana an-dalana kanjo nodarohin’ilay miaramilan’ny Jenia fa hoe tsy nanao arovava. Nandeha irery ilay miaramila ka nanontany azy ny antony tsy nanaovany arovava. Nana­za­va anefa ilay niharam-boina fa mbola nisakafo kely ka izay ny antony nanalany ny sarom-bava sy ny orona. Naratra mafy noho ny daroka nahazo azy ity rangahibe ity ary tsy vitan’izay fa mbola norahonan’ilay miaramila ho faty koa izy, araka ny fampitam-baovao hatrany. Voalaza fa tovolahy mpihetraketraka ity miaramila ity ka nahatonga ny ray aman-dreny nandefa azy hanao miaramila kanjo mbola nitohy ihany izany, araka ny fanampim-panazavana voaray.
Araka ny vaovao azo, hatolotra fampanoavana ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toama­sina ity raharaha ity, anio. Efa vita kosa ny fanadihadiana sy ny fandraisana an-tsoratra tamin’ireo vavolombelona sy ny niharam-boina. Efa miomana hirohotra eny amin’ny fitsarana ireo fokonolona tsy manaiky ity herisetra natao tamin’ilay lahiantitra ity. Ho hita eo izany ny tohiny anio.